‘जाडोमा हुन सक्छ हृदयाघात’ – mYKantipur.Com
कुनै न कुनै कारणले हामी सबै मुटुरोगको जोखिममा छौं। पहिल्यै मुटुरोगको जोखिममा रहेकाहरूका लागि त जाडो मौसम झनै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। जाडो मौसममा मुटुरोगबाट कसरी बच्ने ? यस विषयमा नागरिक दैनिककी पवित्रा सुनारले काठमाडौंस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलसँग कुराकानी गरेकी छन् :
पहिलो कुरा, प्रदूषणले कुन तहमा असर गरिरहेको छ भन्ने ’boutमा नेपालमा कुनै मापदण्ड तयार भएको छैन। प्रदूषणले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ। प्रदूषणले बाहिरीभन्दा भित्री असर बढी गर्छ। हामी बाहिर धेरै हिंड्छौं। आज धेरै प्रदूषणको सम्पर्कमा रहनुभयो भने त्यसले आजै असर गर्छ। स–साना धुलोका कणहरू फोक्सो हुँदै रगतमा मिसिएर मुटुमा पुग्छन्। त्यसरी मुटुमा पुगेपछि मुुटुका रक्तनलीमा मिसिन्छन्। यसले रक्तनलीमा रगत जम्ने समस्या बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा पहिल्यै जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई मुटुका रक्तनली साँघुरो भएर हृदयाघात पनि हुन सक्छ। यस्तै प्रदूषणमा लामो समय बिताइयो भने दीर्घकालीन असर गर्छ। मुटुमा अवरोध गर्ने, कोलेस्ट्रोल बढ्नेजस्ता समस्या आउँछन्।
महान्यायाधिवक्ताको राय : पाठकमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्न सक्छ
काम पाइँदैन, के खाने ?
हुन्डाईको नयाँ स्यान्ट्रो भित्रियो